Hogaamiyaha sare ee dalka Iiran ayaa Axadda maanta ah taageeray go’aanka ay xukuumadda dalkaasi ku kordhisay sicirka shidaalka, wuxuuna ugu yeeray debedbaxayaasha arrintaasi ka carooday ee banaanbaxyada ka wada dalkaasi iney yihiin “burcad” taasi oo muujinaysa iney iman karto tallaabo adag oo ka dhan ah banaanbaxayaasha.
Hadalka Aayatullaah Cali Khamenei ayaa yimid xilli ay maamulka dalkaasi xayireen adeegyadii internetka ee dalka oo dhan si ay u xakameeyaan bannaanbaxyada ka socda ilaa 20 magaalo oo ay dadweynuhu ku muujinayaan cabashadooda ay ka qabaan go’aanka sicir kordhinta shidaalka ee ay xukuumaddu maalintii Jimcaha sare u qaaday 50%.
Debedbaxyada qaar ayaa isku bedelay kuwa rabsho watta, iyadoo la arkayay mudaaharaedeyaal dab qabadsiinaya taayarada ayna jirto meelaha qaar oo dhawaqa rasaasta la maqlayay.
Khudbad laga sii daayay telefeshinka qaranka ayuu Khamenei ku sheegay in banaanbaxyada ay dad naftooda ku waayeen kuwa kalana ku hanti beeleen.
Waxa uu ugu yeeray debedbaxayaasha koox “burcad” ah oo ay soo abaabuleen kuwa kacaanka dalkaasi ka soo horjeeda iyo “cadaw shisheeye ah.” Si gaar ah ayuu u magacaabay kuwa xiriirka la leh qoyska boqorkii hore ee Iiraan ee talada laga eryey 40 sano ka hor iyo kooxda masaafuriska ku maqan ee Mujahedeen-e-Khalq.
Mudaaharaadyadan ayaa ah kuwo culeys cusub ku soo kordhiyey dowladda Iiraan oo iyadu la daalaa dhaceysa cunaqabateyn dhanka dhaqaalaha ah oo uu ku soo rogay Madaxweynaha Mareykanka ka dib markii uu ka baxay heshiiskii dhanka hubka atoomikada ah oo ay Tehran la gashay wadamada galbeedka oo uu Mareykanku ka mid ahaa.